Shirka Beelaha Cali-saleeban ee ku dhaqan Yurub oo maalintii labaad galay+Sawiro – SBC
Shirka Beelaha Cali-saleeban ee ku dhaqan Yurub oo maalintii labaad galay+Sawiro
Waxaa maalintii labaad galey kulan magaalada Stochlohom eecaasimada wadanka Sweden ay ku leeyihiin halkaasi dad ka kala socda qaybaha bulshada oo ka soo jeeda Beelaha Cali Saleebaan kuwaasi oo kala yimid wadamada Yurub & Mareykanka.
Qabanqaabiyeyaasha shirkan ayaa u sheegay SBC in shirkan ajandayaashiisu ay ka mid yihiin sidii beeshu uga wada hadli laheyd xaalada guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland ee beeshu degto, isla markaana aragti guud uga qaadan lahaayeen arimahaasi.
Shirkan ayaa sidoo kale waxa looga hadlayaa danaha beesha Cali-saleebaan iyo sidii beeshu u midoobi lahayd oo hogaan iyo argti qura u yeelan lahayd.
Shirkaan oo maanta looga dooday ajendayaal xasasai ah aayanan wali ka soo bixin baxin natiijadiisa, waxaana lagu wadaa inuu malainta isniinta ah soo saaro bayaan cad oo ku aadan gunaanadka & natiijada shirkaasi.
Cabdirsaq Sheekhaduun o ka mid ah gudiga qaban qaabada shirkaasi ayaa saaxafada u sheegay in shirkaanu u yahay mid muhiimda lagu saarayo sidii beeshu uga qayab qadan lahyeed hormarinta degaanada ay degto oo dhan walba leh.
Shirkan oo qaban qaabadiisu indhoweyd socotay ayaa waxa la filayaa inuu socdo mudo 3 maalmood hoolka shirkan uu ka furmay waxa ku sugan dhamaan qaybaha Bulshada sida Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Culima’udiin, Dhalinyaro iyo haween.
Shirkaan waxaa furintaankiisa uga qayb galay khadka telefoonka Jaliyadaha Marykanka iyo Canada waxana halkaasi hadalo qiimo badan telefoonka kaga jeediyeey mMuse Xaaji Aees iyo Dr Farjac oo labaduba ahaa musharxiin u soo tartamay xilka madaxweynenimada Puntland.
Sidoo kale waxaa Khadka Telfoonka kaga qayb galay shirkaasi isinka Guud ee beelaha Cali Salebaan Beeldaaje Faarax Cabdulaahi Beeldaaje halkaasaina ka jeediyeey guubaabo iyo duco uu kula dardaramay ka qayb galayashii shirka.
Shirkaan oo ah mid aad u culus ayaa dad badan siyaasada saadaaliyaa ku tilmaameen mid beesha ay kaga tashan doono ayaaha siyaasdeed ee Puntland ka dib markii ay soo baxeen bayaano is barbar socda oo la sheegay qaarkood in kalsoonida laga noqonaayo maamulka Puntland.
SBC International Sweden
Walaal in la shiro ma xuma, laakiin aayaha Puntland ma hal beel baa ka tashanaysa?
Anigu waxaan qabaa in ay ka dambeeyaan siyaasado gurracan oo meelo kale laga soo raray oo qaarkood mira xun ay ka dhalan doonaan,
waxay kaga habboonayd in ay ajandaha ka dhigaan reerka oo ka shiraya danohooda gaarka ah iyo colaadda dhex martay beelaha kale ee dariskooda ah.
masha allaah waa arin aad u muhiim ah in ay tashtaan waayo niman cali jibrahiil la dhaho baa wadadii bari ka xirtay sidaa darteed in ay is waal waalka joojiyaan dar baay u tashanayaan tashta dheh hadii kale cj baa malinba mid cunaya
ibnu khamiis says:
adeer waxan idiin sheegayna in beelweynta cali saleebaan ay maamulka ini faroole katashadeen waadna arkidoontaan ogaadana puntland waa bari barina waa bosaso reer bariga mooye inta kalooy xageed adaysan sow gajo idin layn mayso
waxaan soo dhaweenaya shirka waana taageeraya anoo ka mid ah beesha kor ku xusan waxaana ooga jawaabaya shirku waa shir guud oo loogo tashanayo aayaha beesha